Fomba fampiasa ny ronono tsy ampoiznao | FJKM Amboniloha
1. Ao andakozia : sady manalefaka ny hena no manome tsiro hafakely ny ronono.
Raha mivaingana ka zary mafy be ny hazandranomasina tao anaty vata fampangatsiahana. Lomy ao anaty ronono, sady manome tsiro hafa kely azy io no manalefaka kokoa ny nofony. Andramo fa ho hitanao.
2. Fanatanjaha-tena : miady amin’ny « Crampes » sy ny « Courbatures » ny ronono.
Isaky ny avy manao fantanjaha-tena ny ankizy, omeo ronono izy fa sady tiany io no manampy azy tsy ho tratry ny « Crampes » sy ny « Courbatures ». Mety koa io na ho anao efa tanora zokiny aza.
3. Fikarakara-batana : manadio ny odi-tava ny ronono
Izay rehetra nanandrana dia nanohy avy hatrany. Nampiasa « maquillage » maromaro ianao androany ? Ronono hanadiovana ny hodi-tava, sady natoraly, no mora vidy lavitra noho ireo « démaquillant » fampiasa rehetra.
4. Manadio lamba : manala ny ankamaron’ny tasy amin’ny lamba ny ronono
Mazana no tasy ny ankanjo rehefa mihinana vonkazo ny ankizy. Rehefa avy mianatra koa izy dia mazana misy soratra na ranomainty ny akanjony. Aza mandeha lavitra intsony, alonay anaty ronono matimaty na mahamay mandritra ny ora iray eo ilay faritra misy tasy, sasao amin’ny rano sy savony avy eo. Ho hitanao fa hiala tsotra kokoa ny tasy avy eo.
5. Fikarakarana tokatrano : Manala ny fofona maimbo ao antrano ny ronono
Misy fofona tsy dia tsara loatra henonao ao atrano ? Ataovy anaty lovia jobo maromaro ny ronono ary apetraho eny amin’ny toerana tena henonao fa misy fofona. Miavaka amin’ny ireo « désodorsant » mahazatra ity fomba ity satria ireny akora simika ireny dia, manampina fotsny ilay fofona, fa tsy manaisotra azy. Ny ronono kosa dia misintona ny fofona ka manafoana izany. Aza avela ho masiso eny nefa ny ronona na izany aza.
6. Fikarakarana ireo fitaovana tranainy : Manavao ny fitaovana bakoly ny ronono.
Ahoana tsara hoe : misy lova avy amin’dry bebe ato atrano, « service en porcelaine » hoy ny mahazatra. Nalonako tao anaty tsatokaty fen ronono ireo fitaovana ireo ary navelako hangotraka adin’ny 4 amin’ny afo malefaka. Ny proteina amin’ny ronono no nikarakara sy namitrana indray ny ankamaroan’ireo triatriatra kely madinika tamin’ireo fitaovana. Tena mahagaga an.
Catégories :	Fantatrao ve ?	/ par AnjGab 19 septembre 2014
Fanomezana anisan'ny tsara indrindra nomen'Ilay Nahary antsika ny ronono. Maro ny zava-tsoa entin’ny ronono ho an’ny...